सबैको सहयोग भयो भने अंचल अस्पतालको मुहार फेर्न सकिन्छ– राना | नयाँ विश्व
सबैको सहयोग भयो भने अंचल अस्पतालको मुहार फेर्न सकिन्छ– राना
बागलुङ । बागलुङमा रहेको अञ्चल अस्पतालको अध्यक्षमा केवी राना मगर चयन भएको तीन महिना पुग्यो । तीन महिनाको अवधिमा उनले अंचल अस्पताललाई परिर्वतन गर्नको लागि धेरै पापड बेले ।
म आउन भन्दा पहिले ११ जना अध्यक्ष फेरिए तर अंचल अस्पतालको दुरदशा भने कहिल्यै फेरिएन केवी राना मगरले भने । यदि अंचल अस्पताललाई आफ्नो घर सम्झेर अगाडिका अध्यक्षहरुले काम गरेको भए आज यो अवस्थाबाट अंचल अस्पताल गुर्जनुपर्ने थिएन उनले भने ।
म अंचल अस्पतालको अध्यक्षमा पदमा बस्नको लागि मात्रै चयन भएको होइन मेरो कार्यकालमा यो अस्पतालको विषम अवस्थालाई अन्त्य गरेरै छाड्ने अभियानमा जुटेको छु उनले भने ।
अस्पताल भनेको सधै सफा सुग्घर हुनुपर्छ । यहाँ धेरै थरिका रोगको विरामी र मानिसहरु आउँछन् तर पब्लिक ठाउँको वातावरण यति दुर्गन्धित थियो कि ती कुरै नगरौं । एक हिसाबले भन्ने हो भने अस्पताल अस्पताल जस्तो नै थिएन उनले भने ।
अहिले कमसे कम सरसफाइ दिनहुँ हुने गरेको छ । वरपरको झाँडी बडो मेहेनत गरेर हटायौं । वर्षाको बेलामा झाडीबाट सर्प समेत अस्पतालभित्र पस्ने गरेको मैले सुने । तर अब ती कुराहरुको अन्त्य भइसकेको छ राना मगरले भने ।
बाह्य वातवरणमात्रै होइन भित्र रहेका ल्याबको पनि अवस्था नाजुक थियो । सामाजिक कार्यमा लाग्ने मजस्ता मान्छेको लागि यो उचित थिएन त्यसैले म एक्सनमा उत्रिए उनले भने ।
अहिले आउट लुक राम्रो भएको छ अब भित्रि व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ उनले भने । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको व्यवस्थापन मुख्य काम छ ।
डाक्टरहरुको रमाना रोक
यहाँ त के परिपाटी रहेछ भने डाक्टरहरु आज आउँछन् हाजिर हुन्छन् भोलि आउँदैनन् । यसरी अंचल अस्पतालबाट नागरिकले कसरी सुविधा पाउन सक्छन् उनले भने । अंचल अस्पताल भनेको बागलुङको मात्रै होइन यो त धौलागिरीमा रहेका लाखौ नागरिकको स्वास्थ्य जीवनसँग जोडिने स्थान हो तर डाक्टरहरुको आउजाउले यहाँ राम्रो उपचार नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले मैले कुनै पनि डाक्टरलाई सरुवाका लागि रमाना नदिन मेसुलाई भनेको छु । अब कोहि आउँदाको भोलिपल्ट नै जान पाउँदैन उनले भने ।
अस्पतालमा आवश्यक इकुमेन्टहरु छन् तर डाक्टरहरु नभएकै कारण नागरिकहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् । राज्यले १४।१५ डाक्टरको दरबन्दी दिएको छ तर डाक्टर आउने जाने मात्र काम भइरहेको छ अब यस्तो पाराले हुँदैन उनले भने । अब आवश्यक कन्सन्सटेन्स पूत्र्ति हुन्छ र सोही अनुसारको उपचार सेवा नागरिकले पाउनेछन् । मैले भनेको छु इमान्दारीता निभाउनुहोस् ।
कानून राम्रो, कार्यान्वयन छैन
नेपालको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भनिन्छ तर कार्यान्वयनमा फितलो छ । कानून लागू नभएकै कारण अंचल अस्पतालको भवन ११ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । राजनीतिक स्वार्थका आडमा ठेक्कापट्टा हुन्छ अनि कहाँबाट कानून लागू हुन्छ । अंचल अस्पतालको अध्यक्ष बनेको छु तर अधिकार मसँग धेरै छैन तर पनि मैले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरेर ११ वर्षदेखि अस्पतालको भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न र कानून बमोजिम कारवाही गर्न पहल गरेको छु उनले भने ।
ठेकेदारलाई भन्यो हामीलाई नभुन्नुहोस शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमा भन्नुहोस भन्छ उता भन्दा ठेकेदारलाई भन्नु भन्छ हामी चेपुवामा छौं हाम्रो हातमा कुनै पनि अधिकार छैन उनले भने । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्नु ? काम गर्न जिम्मा दिएपछि अधिकार पनि त दिनुपर्यो नी उनले भने ।
सांसद जवाफदेही भएनन्
धौलागिरीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी कुनै पनि जिम्मेवार नभएको उनको दुखेसो छ । हामीले बागलुङका सांसदहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गर्यो । अंचल अस्पतालको स्थितिका बारेमा जानकारी गरायौं तर उहाँहरु जवाफदेही हुनुहुदैन उनले भने । यदी सांसद जवाफदेही भएको भए आज यस्तो दुरदशा अंचल अस्पतालको हुने थिएन ।
नेताहरुलाई हामीले जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनौं । यसरी कसरी देशको विकास हुन्छ । धौलागिरी अंचल अस्पतालको अपन्त्व नेताहरुलाई हुन सके पो नागरिकले राम्रो सेवा पाउँछन् तर यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । उनले भने ।
अब अंचल अस्पतालको मुहार फेरेरै छाड्ने संकल्प लिएको छु । जबसम्म नैतिकता हामीमा हुँदैन तबसम्म केही हुन सक्दैन त्यसैले अब सरोकारवाला सबैसँग सामुहिक छलफल, जनसहभागीता मुलक अभियानबाटै यसको विकास सम्भव छ उनले भने ।
अंचल अस्पताल भनेको छ । सामान्य औषधी पनि नपाउने स्थिति छ । अब राज्यले निशुल्क किटान गरेका औषधी पाउने व्यवस्था मिलाउनेछु उनले भने । अहिले २५।३० प्रकारका औषधि निशुल्क पाइन्छ होला अब ७२ प्रकारकै औषधि पाउने व्यवस्थाको पहल थाल्छु उनले भने । हामीले रणनीतिक योजना बनाएर अस्पताललाई गुणस्तर कायम गर्न खाजेका छौं ।
स्थानीय तह र राज्यबाट अस्पताललाई चाहिने आवश्यक बजेट र जनशक्ति ल्याउन सके विद्यामान परिस्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई आत्मा विश्वास छ । सेवाग्राहीले अनुभूति गर्ने गरिकन केहि परिर्वतनहरु गरेका छौं रानाले भने । हामीलाई सबैको सहयोग भयो भने धौलागिरी अंचल अस्पतालले मुहार फेर्नेछ । त्यो अभियानमा हामी लागेका छौं । अस्पताललाई अस्पताल जस्तो बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ ।
३४ बर्षदेखि ‘कस्मेटिक’ व्यापार
७४ वर्षिया चौलागाईले गरिन भत्ता सँगालेर बाख्रापालन,आम्दानीले गलाभरी सुन (भिडियो सहित)
विदेशबाट फर्केका तीन भाईले खोले बागलुङमा ‘सेल्स मार्ट’
आहा ! बन्जी जम्प (फोटोकथा/भिडियो)
दिपकको १० वर्षको बैंकिङ अनुभव– सेन्चुरी बैंकमा लागेर मैले च्यालेन्जलाई एसेप्ट गरेको हुँ
शिवशंकरको रोचक प्रगतिस् वर्कसपको कामदारदेखि बजाज स्वरुमको मालिकसम्म
‘जेरी’ ले फेरेको जिन्दगी (फोटोकथा)
पार्वतीको गाउँमा ‘बटुवा’ (फोटोफिचर)
बागलुङ कालिकाको मुहार फेर्ने खड्का
जगन्नाथ आचार्य : भगवानसँग मागेको छोरा
बीपीसँग चार दिन
गरिबी घटाउन बचत र उत्पादनमा जोड गरौ( शर्मा भिडियोे)
सृष्टिको नयाँ ‘सृष्टि’
कालिका कन्या मन्दिर माविलाई नमूना प्राविधिक विद्यालय बनाउने सोच छ
डा. पोखरेलको त्यो टिम जसले धेरैलाई मृत्युको मुखबाट बचायो
सन्तोषको १० वर्षे बैकिङ अनुभव स् मेहनतले प्रगतिको शिखर चुमे